DAM နယူးယောက် - ကို Creative Ops အစည်းအဝေးများ - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DAM နယူးယောက် - ကို Creative Ops အစည်းအဝေးများ
ဒီနေရာတွင်မေလ 2015-7 အပေါ် DAM နယူးယောက် 8 မှာအရပျကိုယူပြီးအဆိုပါကို Creative စစ်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးများထံမှမြျှောလငျ့နိုငျတယျ:
ကို Creative Media မှပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေ
ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အရည်အသွေး output ကိုအကြားတစ်ဦးကိုထူထောင်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါသည်။ ဒီ panel တွင်ပရိသတ်ကိုဘယ်လိုဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများချဉ်းကပ်နှင့်နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ပူးပေါင်းဖွင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသည်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာ enviroments မှာ - ဖြေရှင်းခံရဖို့လုပ်ငန်းအသွားအလာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းအရာပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ခွင့်ပြုချက်, တာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် (ထပ်တူပြုခြင်းနှင့်ရှယ်ယာ) ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ကို Creative စစ်ဆင်ရေး Solutions အပေါ်အမြင်များ
ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးခုနှစ်တွင်ပရိသတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို Creative စစ်ဆင်ရေး "ဖြေရှင်း" ရန်လိုအပ်ကြောင်းတစ်ဘုံအသိအမှတ်ပြုမှုကိုမျှဝေသုံးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစကားကိုနားထောင်မည်, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးကဖြေရှင်းရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းခရီးကိုယူတဲ့သူ။ အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်၎င်းတို့၏ DAM သုံးပြီးအဖြေတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သူတစ်ဦးလက်လီအရောင်းဆိုင်ထံမှစကားကိုနားထောင်ကြလော့။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက် built ကွောငျးမီဒီယာကုမ္ပဏီထံမှ။ နှင့်ဖန်တီးမှုစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အကောင်းဆုံးဖောက်၏ tool ကိုအသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီထံမှ။
အဆိုပါကို Creative စစ်ဆင်ရေး Path ကို Down Walking
ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးခုနှစ်တွင်ပရိသတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များကမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုစစ်ဆင်ရေး Maturity နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ်သုံးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်နားထောင်မည်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ဘုံ၌ပါဝငျမိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို Creative စစ်ဆင်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် function ကိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုစစ်ဆင်ရေးခရီးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လအကြာကဘယ်မှာ 12 ကြသလဲ သူတို့ကယနေ့အဘယ်မှာရှိကြသနည်း သူတို့အဘယ်မှာရှိချင်နှင့် 12 လအတွင်းဖြစ်ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားသလဲ? ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အ 12 months ago မဟုတ်ကြကြောင်းယနေ့အဘို့အဆင်သင့်ဘာတွေလဲ? သူတို့ကပရိသတ်ကိုထံမှအကြိုးပွုနိုငျကွောငျးအဘယျသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ယူကြသနည်း
Prudential, Kohler Co. , Kohl ရဲ့ဦးစီးဌာန Stores, ဟာသဗဟို, အာနိုးကမ္ဘာတစ်ဝန်း Showtime ကွန်ယက် Inc နှင့်အခြားသူများကိုအောင်မြင်စွာ DAM New York မှာကဤအစည်းအဝေးများမှာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက် DAM ပြုကြရန်တွန်းအားပေးနေကြသည်ကိုဘယ်လိုနားထောင်ကြလော့။
သွားကြဖို့လေးပတ်နှင့်အတူ, သင့်ရာအရပျစာအုပ်ဆိုင်နှင့်နေရာယူပြီးသည့် 70 + စပီကာများနှင့် 40 + အစည်းအဝေးများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရအချိန်နေဆဲရှိပါတယ်။
BBEAT100 နှင့်အတူ $ 100 Save
ခရစ္စတိုဖာ Smout အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
DAM နယူးယောက်:2ရက်သတ္တပတ်သွားကြဖို့ - ဧပြီလ 20, 2015
DAM နယူးယောက် - ကို Creative Ops အစည်းအဝေးများ - ဧပြီလ 13, 2015
DAM နယူးယောက် join ဖို့5ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက် - မတ်လ 31, 2015
DAM ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာတမ်းဖတ်ပွဲ ပေးခဲ့သည်	2015-04-13
ယခင်: T2 ကွန်ပျူတာ 2015 NAB ပြရန်မှာ Panasas Reseller Named
နောက်တစ်ခု: ဘက်ပေါင်းစုံမိုက်ခရိုဝေ့ Technologies က '(IMT) နောက်ဆုံးရ ENG transmitter ပလက်ဖောင်း, VT8, NAB 2015 မှာအသံကျယ်ရှင်းလင်းရန်အတွက်လာ